कीर्तिपुरमा किन उड्न छाड्यो बेलुन ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»कीर्तिपुरमा किन उड्न छाड्यो बेलुन ?
By रबि धिताल on २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ००:३५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, भदौ २९ : बिहानको ६ बज्दानबज्दै कीर्तिपुरबासी धेरैको आँखा आकाशतिर हुन्थे । बच्चाहरु त कौशीमा गएर बेलुन कहाँसम्म पुग्छ भनेर देखिन्जेल हेर्थे । दुई महिनासम्म कीर्तिपुरको आकाशमा उडेको बेलुन भने आजकाल नदेखिने गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमको जानकारी लिन वेदर बेलुन अर्थात रेडियो सोन्ड उडान थालेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरबाट असार ६ गतेबाट हरेक बिहान ५ ४५ मा बेलुन उडाउने गरिन्थ्यो ।
वायुमण्डलको मौसमी गतिविधि थहा पाउन उडाउने बेलुन अहिले प्राविधिक कारण देखाउँदै उडाउन सकेको छैन । तीन हप्तायता बेलुन उड्न छोडेपछि कीर्तिपुरवासीलाई समेत बेलुन नउडेकोमा कौतुहल छ । बेलुन उडउन हाइड्रोजन ग्यासको आवश्यकत हुन्छ । यस ग्यास उत्पादन गर्ने मेसिन हाइड्रोजन जेनेरेटरमा समस्या देखिएपछि बेलुन उडान बन्द गरिएको हो ।